သင်၏ LG Bootloader ကိုသော့ဖွင့်နည်း | Androidsis
အောက်ဖော်ပြပါလက်တွေ့ကျသင်ခန်းစာတွင်မှန်ကန်သောဖြစ်စဉ်ကိုကျွန်ုပ်ပြသမည် သင်၏ LG Bootloader ကိုသော့ဖွင့်ပါအထူးသဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် bootloader သို့မဟုတ် bootloader ကိုသော့ဖွင့်နိုင်လိမ့်မည် LG G4 မော်ဒယ် H815, LG G5 မော်ဒယ် H850 y LG V10 မော်ဒယ် H960A ။
ဒီဖြစ်စဉ်တစ်ခုလုံး သင်၏ LG ၏ Bootloader ကိုသော့ဖွင့်ပါအစပိုင်းမှာတော့အတွေ့အကြုံနည်းတဲ့သုံးစွဲသူတွေအတွက်အနည်းငယ်ငြီးငွေ့ဖွယ်ရာဒါမှမဟုတ်ခက်ခဲလွန်းပုံရပေမယ့်စာကိုဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ပြတော့မယ့်အဆင့်တွေကိုလိုက်နာမယ်ဆိုရင်ဒီအရာဟာပုံရိပ်ကသိပ်မခက်ခဲဘူးဆိုတာသင်သဘောပေါက်လိမ့်မယ် ကြက်တွန်သောသူထက်သင်သည် bootloader သော့ဖွင့်ပြီးအဆင်သင့်ဖြစ်လိမ့်မည် သင်၏ Android terminal ၏ Modified Recovery နှင့် Root ကို install လုပ်ခြင်း.
1 သင်၏ LG ၏ Bootloader ကိုသော့ဖွင့်ရန်အတွက်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်လိုအပ်ချက်များ
2 သင်၏ LG Bootloader ကိုသော့ဖွင့်နည်း
သင်၏ LG ၏ Bootloader ကိုသော့ဖွင့်ရန်အတွက်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်လိုအပ်ချက်များ
ပထမလိုအပ်ချက် (သို့) သင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်အချက်မှာသတိပြုရန်မှာ၎င်းကိုသိရှိရန်ဖြစ်သည် သင်၏ LG terminal ၏ bootloader ၏သော့ဖွင့်ခြင်းကိုဆက်လက်လုပ်ဆောင်သည့်အခါသင် terminal ၏အချက်အလက်နှင့်အချက်အလက်အားလုံးကိုသင်ဆုံးရှုံးလိမ့်မည်အကယ်၍ သင့်မှာအထိခိုက်မခံတဲ့ပစ္စည်းရှိရင်၊ အကုန်အကျများစေကာ၊ သင်သိမ်းဆည်းထားချင်တယ်ဆိုရင်၊ အဲဒါဟာကောင်းတဲ့အကြံဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ပထမ ဦး ဆုံးသတိပေးတယ် သင်၏ဓါတ်ပုံများ၊ ဗွီဒီယိုများ၊ တေးသီချင်းအားလုံးကိုအရန်ကူးပါ နှင့် bootloader သော့ဖွင့်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ပြီးနောက်ယေဘုယျအားဖြင့်သင်ပြန်လည်ထူထောင်လိုသောအရာအားလုံး။ ငါသည်လည်းအတူလုပ်နေတာအကြံပြုပါသည် သင်၏ LG တွင်တပ်ဆင်ထားသော application များနှင့်ဂိမ်းများအားလုံး.
၎င်းကိုယူဆပြီးနားလည်ပြီးသည်နှင့်သင်ပြုလုပ်ပြီးသားမရှိသေးပါကနောက်ထပ်လုပ်ဆောင်ရန်ဖြစ်သည် LG driver များကိုထည့်သွင်းခြင်း Windows operating system ဖြင့်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်။ ဒီအတွက်တော့၊ ငါပြထားတဲ့အဆင့်တွေကိုပဲလိုက်နာရမယ် ဒီလက်တွေ့ကျသင်ခန်းစာ.
အားလုံး၏နောက်ဆုံးအဆင့်နှင့်ဖြည့်ဆည်းရန်မရှိမဖြစ်လိုအပ်ချက်မှာသင်၏ Windows operating system တွင်၊ အထူးသဖြင့် C / drive အတွင်း ADB နှင့် Fastboot တပ်ဆင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဒီသင်ခန်းစာမှာတော့ ADB နဲ့ Fastboot ကိုရိုးရှင်းတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုတစ်ဆင့်ချင်းပြသမယ်.
သင်၏သဟဇာတဖြစ်သော LG mobile မှ terminal Terminal နှင့် in သို့သွားမည် ကိရိယာ / ဆော့ဖ်ဝဲသတင်းအချက်အလက်အကြောင်း စုဆောင်းခြင်းနံပါတ်ဆိုသည့် option ကိုတန်းခုနစ်ချက်နှိပ်ရမည်။ ပြီးပြီဆိုလျှင် setting များကိုလုံးဝပိတ်ပြီးအရာအားလုံးအဆုံးမှာ option အသစ်တစ်ခုပေါ်လာလိမ့်မည်။ ဖွံ့ဖြိုးမှုရွေးချယ်စရာများ u Developer ရွေးချယ်စရာများ။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤရွေးချယ်စရာများ menu အသစ်ကိုဖွင့်ပြီးရွေးချယ်ပါ ကျနော်တို့က USB debugging option ကိုသက်ဝင် နှင့်ကပြောပါတယ်သော option ကို OEM သော့ဖွင့်ရန်ခွင့်ပြုပါ.
ဒါတွေအားလုံးပြီးတာနဲ့ငါတို့မှာ LG ဘက်ထရီကိုအားပြည့်နေပြီဆိုတာစစ်ဆေးပါတယ်။ ကျနော်တို့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကွန်ပျူတာကို restart လုပ်ပါ ကျနော်တို့အပေါ်သင်ခန်းစာနှင့်အတူဆက်လက် သင်၏ LG Bootloader ကိုမည်သို့သော့ဖွင့်ရမည်နည်း.
သင်၏ LG Bootloader ကိုသော့ဖွင့်နည်း
ADB နှင့် Fastboot ကိုထည့်ထားသော folder သို့ကျွန်ုပ်တို့ C / အက္ခရာဖြင့်ဖော်ပြထားသော Windows ၏ root directory တွင်ယေဘုယျစည်းမျဉ်းအရ Android folder ထဲသို့ဝင်သည်။ ကို C / Android ဒီဖိုဒါထဲရှိမည်သည့်နေရာတွင်မဆိုကျွန်ုပ်တို့သည်ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ SHIFT ကျွန်ုပ်တို့၏ Windows ၏ (အကြီး) ကျနော်တို့ညာဘက် mouse ကိုခလုတ်ကိုနှိပ်နေစဉ် နှင့်ပေါ်လာတဲ့ dialog box ထဲမှာကျနော်တို့၏ option ကိုရွေးပါ Command window ကိုဖွင့်ပါ.
ကျွန်ုပ်တို့၏ LG ကိုကိုယ်ပိုင်ကွန်ပျူတာနှင့်မူရင်း USB ကြိုးဖြင့်ဖြစ်နိုင်လျှင်ဖြစ်နိုင်ပါကအောက်ပါညွှန်ကြားချက်များကိုလိုက်နာသည်။
Terminal (သို့) command window ထဲမှာအောက်ပါ command ကိုရိုက်ထည့်ရပါလိမ့်မယ်။
adb reboot bootloader ကို
သေချာတာကတော့ LG ရဲ့မျက်နှာပြင်မှာကြည့်ကြည့်ပါ ADB မှတစ်ဆင့် connection ကိုအတည်ပြုရန်လိုအပ်သည့် window တစ်ခုပေါ်လာလိမ့်မည် ကိုယ်ပိုင်ကွန်ပျူတာနှင့်အတူ။ ခွင့်ပြုချက်ပေးပြီးပုဂ္ဂိုလ်ရေးကွန်ပျူတာနှင့်ဆက်သွယ်မှုကိုအတည်ပြုသည့်အပြင်၊ adb မှတစ်ဆင့်ဆက်သွယ်မှုကိုခွင့်ပြုမပြုထပ်မံမမေးမြန်းရန်သက်ဆိုင်ရာအကွက်ကိုစစ်ဆေးရန်သတိရပါ။
Terminal ကိုခွင့်ပြုချက်ပေးပြီးသည်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ LG ကကျွန်တော်တို့ကို bootloader mode ကိုပြသရန်အလိုအလျောက်ပြန်လည်စတင်ပါမည်။ အကယ်၍ ၎င်းသည်အလိုအလျောက်ပြန်လည်စတင်ခြင်းမရှိပါကယခင် command ကိုထပ်မံထည့်ပြီး Enter ခေါက်ပါ။
အောက်ပါ command ကိုရိုက်ထည့်ရပါမယ်။
fastboot OEM device ကို - အိုင်ဒီ
terminal သို့မဟုတ် command ၀ င်းဒိုးသည်ဤကဲ့သို့သောသတင်းအချက်အလက်ကိုဖော်ပြလိမ့်မည်။
အခုငါတို့လုပ်ရပါလိမ့်မယ် မျဉ်းကြောင်းတစ်ခုနှင့်နေရာလွတ်မရှိဘဲဆက်သွယ်ပါ စာသားအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောနံပါတ်များနှင့်အက္ခရာများအားလုံး ကိရိယာ ID ငါတို့မှာဒီလိုမျိုးတစ်ခုခုရှိတယ် - \_ t
နံပါတ်ကိုပြသည်နှင့်တပြိုင်နက်ကျွန်ုပ်တို့သည် bootloader mode ကိုအောက်ပါ command ဖြင့်ထွက်သွားပါမည်။
LG ပြန်လည်စတင်ပြီးတာနဲ့ ကျနော်တို့တယ်လီဖုန်း Dialer ဖွင့်လှစ် နောက်အောက်ပါကုဒ်ကိုရေးသည်။ * # 06 # ကျွန်တော်တို့ LG ၏ IMEI နံပါတ်ကိုအစီရင်ခံရန် ဂဏန်း ၁၅ လုံးပါဂဏန်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့ရေးပြီးသိမ်းရမယ်။
ယခုအခါကျွန်ုပ်တို့၏ Windows ၏ဝက်ဘ်ဘရောက်ဇာမှမည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ ကျနော်တို့ LG ၏တရားဝင်စာမျက်နှာကိုသွား ဒီတူညီတဲ့ link ကိုနှိပ်လိုက်ရင်, နှင့်တစ်ခုလုံးရဲ့အောက်ခြေမှာကျနော်တို့ကပြောပါတယ်ဘယ်မှာကိုကလစ်နှိပ်ပါ Bootloader ကိုသော့ဖွင့်ခြင်း.
ယခုကျွန်ုပ်တို့သည်သက်ဆိုင်ရာလိုအပ်သောကွက်လပ်များကိုဖြည့်ရမည်။ ကိရိယာ ID, IMEI နံပါတ် LG ၏တရားဝင်စာမျက်နှာကကျွန်ုပ်တို့အားဖိုင်တစ်ဖိုင်လက်ခံရရှိမည့်အီးမေးလ်အသစ်တစ်စောင်ပို့ရန်နှင့်အီးမေးလ်ပို့ပါ Unlock.bin Unlock.bin ဖိုင်ကို download လုပ်ပြီး ADB ဖိုင်တွဲထဲမှာထည့်လိုက်တယ်ဒီနေရာမှာ command window အသစ်တစ်ခုကိုဖွင့်ဖို့ငါတို့အရင်ကပြောခဲ့တဲ့တူညီတဲ့ဖိုင်တွဲထဲမှာ။ Command ၀ င်းဒိုးကိုပြန်ဖွင့်ပြီးအောက်ပါညွှန်ကြားချက်များကိုလိုက်နာသည်။
Terminal သည်နောက်တစ်ကြိမ် bootloader mode သို့ပြန်သွားပြီးအောက်ပါ command ကိုနှိပ်ပါ။
fastboot flash ကို unlock.bin သော့ဖွင့်
နောက်ဆုံးအဆုံးတွင်၊ terminal ကို command နှင့်အတူပြန်လည်စတင်ပါလိမ့်မည်။
ယခု terminal သည်နောက်ထပ်တစ်ကြိမ်ပြန်လည်စတင်ပါလိမ့်မည်။ ဤအချိန်၌သင်၏ bootloader သော့ဖွင့်ခြင်းများရှိသော်လည်းသင်၏အချက်အလက်နှင့်အသုံးချပရိုဂရမ်များအားလုံးဖျက်ပစ်လိုက်သည် ဒါကြောင့်သင်ပြန်လည်ပြုပြင်ထားတဲ့ Recovery ကိုသင့် LG မှာဘယ်လိုတပ်ဆင်ရမယ်၊
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » လဲ tutorial » သင်၏ LG ၏ Bootloader ကိုသော့ဖွင့်နည်း၊ LG G5, LG G4 နှင့် LG V10 အတွက်သင့်လျော်သည်
ချစ်ခင်ရပါသော Francisco, ဤလုပ်ငန်းစဉ်သည် H815p နှင့်သဟဇာတဖြစ်ပါသလား။ အဖြေပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Hello Francisco ကျွန်ုပ်၌ LG K430 သည် bootloder ကိုပိတ်ထားပြီး၎င်းနည်းလမ်းများသည်ကျွန်ုပ်အတွက်အလုပ်မလုပ်ပါ။ တစ်နေ့ကျွန်ုပ်အနေဖြင့်၎င်းကိုလှည့်နိုင်ခြင်းရှိမရှိကိုဂရုစိုက်ပါ။
ငါ့မှာ LG H650 သုည LG HXNUMX ကငါ့ကို bootloader ကိုဘယ်လိုဖွင့်ရမလဲဆိုတာသင်ပေးနိုင်တယ်
ဒီမော်ဒယ်လ်သုံးမျိုးကိုတရားဝင် LG ၀ က်ဘ်ဆိုက်မှာတောင်ရှင်းလင်းစွာရှင်းပြထားသည်။ သူတို့လုပ်သင့်သည်မှာအခြားတူညီသော terminal ရှိအခြားမော်ဒယ်များအတွက်သင်ခန်းစာဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင်အချက်အလက်အနည်းငယ်သာရှိပြီး၎င်းကိုပြုပြင်ရန်ကြိုးစားသောအခါပိုင်ရှင်များသည်ဒုက္ခရောက်သည်။
ကောင်းသောဤလုပ်ငန်းစဉ်သည်သင်၏အဖြေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်များအတွက် k200 အလုပ်လုပ်တယ်
ငါ့မှာ LGKi20AR လိုမျိုးဒီ LGKl20AR လိုမျိုးငါ့ကိုသင်ကူညီလိမ့်မယ်
ကူညီကြပါ! lg k350ar အတွက် Bootloader ကိုသော့ဖွင့်ပြီးကြိုတင်ကျေးဇူးတင်ပါ။
ဗစ်တာ Keysi Cuevas ဟုသူကပြောသည်
Victor Keysi Cuevas အားစာပြန်ပါ
Spotify၊ Apple Music, Google Play Music နှင့်အခြားအသံလွှင့်ချက်အက်ပ်များမှတေးဂီတကိုမည်သို့ download လုပ်ရမည်နည်း